China Hot Sale BiGa ZNC 450 High Quality Taiwan CTEK akara Die Sinking Machine / Die Sinker Electronic Discharge Machine EDM Manufacture and Factory | BiGa
EDM makwaara dị ka igwe na-enwu ọkụ / ọkụ ọkụ eletrik. Ọ bụ itinye n'ọrụ nke ọkụ eletrik na teknụzụ nhazi ọkụ. Ọ dabere na n'oge nsị nchapu n'etiti ngwa ọrụ na ihe eji arụ ọrụ maka iwepu ọla dị oke iji mejupụta akụkụ, ọdịdị na ogo nke usoro nhazi a chọrọ.
Spec / Nlereanya
Njikwa axis Z
nha nke tebụl ọrụ
Njem nke X axis
Njem nke Y axis
Igwe isi igwe
Max. okpokoro iji dochie anya
Max. arọ nke ọrụ ibe
1200 n'arọ 1500 n'arọ 2000 n'arọ
Max. electrode ibu
120 n'arọ 150 n'arọ 200 n'arọ
Ọrụ tank size (L * W * H)
Ike Fliter igbe
Fliter igbe net ibu
150 n'arọ 180 n'arọ 300 n'arọ
Max. mmepụta ugbu a
Max. machining ọsọ
Electrode eyi ruru
Kacha mma elu gụchara
0,2 RAU 0,2 RAU 0,2 RAU
280 Ise 280 Ise 280 Ise
350 n'arọ 350 n'arọ 350 n'arọ
EDM makwaara dika igwe oku oku. Ọ bụ itinye n'ọrụ nke ọkụ eletrik na teknụzụ nhazi ọkụ. Ọ dabere na n'oge nsị nchapu n'etiti ngwa ọrụ na ihe eji arụ ọrụ maka iwepu ọla dị oke iji mejupụta akụkụ, ọdịdị na ogo nke usoro nhazi a chọrọ.
Nke gara aga: CNC EDM Oghere malite ịgba Machine (HD-30CNC)
Osote: EE Ntuziaka ihe eji eme ihe
Die anwụ anwụ Machine anwụ
Edm Die Sinker Na Isi Orbit
Isi Orbit Maka Edm Die Sinker
EDM Oghere malite ịgba Machine (GZ8-F / L)
High ziri ezi Mirror Die ihicha CNC EDM igwe
EDM Oghere malite ịgba Machine (XCC8-F)
Ox Head Die Sinking CNC EDM igwe
EDM Oghere malite ịgba Machine (XZ6-ZQ)
CNC EDM Oghere malite ịgba Machine (HD-450CNC)
Gantry Mkpa egweri igwe, Gantry Single Head Mkpa egweri Machine, Gantry Ugboro abụọ Head Mkpa egweri Machine, Gantry Double-End Mkpa egweri Machine, Gantry Single-End Mkpa-egweri igwe, Gantry Type Mkpa egweri igwe,